Amaahda EDA ee Ganacsiyada Magaalada ee ay saameysay COVID-19 • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Amaahda EDA ee Ganacsatada Magaalada ee ay saameysay COVID-19
Maamulka Horumarinta Dhaqaalaha Mareykanka (EDA) ayaa leh la siiyay lacagaha Xeerka CARES ilaa Hay'adda Horumarinta St. Louis (SLDC) si loo amaahiyo meheradaha sida xun u saameeyay COVID-19 ama bixiya alaabo ama adeegyo wax ka qabta dhibaatooyinka uu sababay masiibada.
U -qalmitaanka iyo Shuruudaha Deynta
Amaahda EDA waxaa loogu talagalay ganacsiyada macaash doonka ah ee ku yaal Magaalada St. Louis. Ganacsatadu waa inay ku jiraan dhammaan canshuuraha iyo shuruudaha shatiga ganacsiga. $ 35,000 kasta oo la amaahiyo, ganacsigu waa inuu abuuray ama hayaa hal shaqo. Amaahdu waxay ku xiran tahay oggolaanshaha amaahda. Waxaa jira $ 100 oo ah khidmadda arjiga aan la soo celin karin, 1% khidmadda asalka ah, iyo kharashaadka xidhitaanka iman kara.
Lacagta amaahdu waxay u dhexaysaa $ 10,000 ilaa $ 300,000 iyada oo dulsaarku ka bilaabmayo kaliya 2%. Deynta deyntu waxay u dhexeysaa saddex ilaa toddoba sano iyadoo ku xiran hadba lacagta loo isticmaalo. Amaahda waxaa loo isticmaali karaa raasumaal shaqeynaya ama alaabada, qalabka, ama hantida ma guurtada ah. Maaliyadaha looma adeegsan karo dib -u -habaynta deynta jirta ama dhismaha iyo kharashyada dib -u -habaynta.
Sida Loo Codsado Barnaamijka Amaahda St. Louis EDA
Si aad u codsato, ka soo dejiso arjiga halkan. U soo gudbi codsigaaga oo dhammaystiran iyo $ 100 khidmadda dalabka (oo lagu bixin karo Shirkadda Horumarinta Deegaanka ee St. Louis):
Hay'adda Horumarinta St. Louis
Fiiro gaar ah: Mudane Chris Maguire
1520 Suuqa Wadada, Suite 2000
Markaad gudbiso codsigaaga, waxaad la shaqayn doontaa sarkaalka amaahda habka oggolaanshaha amaahda iyo dib -u -eegista dokumentiyada. Haddii deyntaada la oggolaado, lacagaha ayaa sida ugu dhakhsaha badan loo bixin doonaa. Ma jiro waqti kama dambeys ah oo la dalbado, laakiin waxaa jira maalgelin xaddidan oo codsadayaasha waxaa la siin doonaa lacago marka ugu horraysa ee la adeego, markaa hubso inaad sida ugu dhaqsaha badan u dalbato.
Khayraad Ganacsi oo Badan
Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown ujeeddadiisu tahay inay siiso ilo iyo macluumaad milkiilayaasha meheradda xaafaddeenna si ay gacan uga geystaan ​​sii wadidda bulsho ganacsi oo xoog leh oo ku nool Dutchtown. Waxaad ka heli kartaa ilo ganacsi oo badan halkan dutchtownstl.org/business.
Filimka hoos Covid-19. Muuji dhamaan qeybaha. Ganacsi iyo Covid-19. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay October 14th, 2021 .
DutchtownSTL.org Covid-19 Amaahda EDA ee Ganacsatada Magaalada ee ay saameysay COVID-19
English (English) • Español (Spanish) • SomGoal rss (Vietnamese) • አማርኛ (Amharic) • العربية (Arabic) • বাংলা (Bengali) • Bosanski (Bosnian) • 简体 中文 (Chinese) • Français (French) • ဗမာ စာ (Burmese) • नेपाली (Nepali) • Afsoomaal ah (Somali)